Mursal iyo Muudey oo Farmaajo u meel-marinaya Mudo-korarsi | KEYDMEDIA ONLINE
Mursal iyo Muudey oo Farmaajo u meel-marinaya Mudo-korarsi
Dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan in wadanka uu jilicsan yahay, oo ay ka dhic karaan dhibaatooyin dib ugu celin kara colaadihii uu kasoo baxay, hadii afartii sano mar la qaban doorashooyinkii dhici jiray.
MUQDISHO, Soomaaliya – Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal iyo ku-xigeenkiisa 1aad ayaa kawado Muqdisho olole xoogan, oo ay ugu jiraan sidii mudo-korarsi labo sano ah ugu sameyn lahaayeen Farmaajo oo waqtigiisa 5 bilood uga hartay.
Xildhibaanno la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in labada mas’uul ay la kulmayaan si gaar-gaar ah xubno katirsan Gollaha Shacabka, iyagoo ku qancinaya inay taageeraan mooshinka mudo-kordhinta.
Waxay Xildhibaanada ka cabsi qabaan in si lama filaan ah loo soo hoos-geliyo mooshinka lawado, kadibna gacan-taag ah lagu ansixiyo, si lamid ah qorshihii lagu riday Kheyre iyo Xukuumadiisii 25-kii July.
Mursal oo Farmaajo u fuliya qorshooyinkiisa ayaa lagu eedeeyay inuu mas’uul ka yahay jahwareerka siyaasadeed ee ka jira hadda Soomaaliya, isagoo xusul-duub ugu jira inuu Farmaajo kursiga ku hayo, sidoo kalena Baarlamaanka uu sii shaqeeyo.
Waxaa khilaaf xooggan kala dhaxeeyaa Mursal gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi, iyadoo labada dhinac isku qabteen arrimo dastuuri ah, taasoo keentay inuu joogsado wada-shaqeyntii labada golle.
Cabdi Xaashi ayaa sheegay in Mursal uu wax ka bedel ku sameeyay xeerar gudiyo labada aqal kasoo shaqeeyaan, kuwaasoo khuseeya sharciyada doorashooyinka, oo la hareer-mariyay Aqalka Sare ee BF.
Mucaaradka iyo Beesha Caalamka waxay uga digeen Farmaajo inuu dib u dhigo doorashadda, sidoo kalena uu sameysto mudo-korarsi aan sharci ahayn, iyagoo ka digey xasilooni darro midaas ka dhalata.
Dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan in wadanka ay ka dhic karaan dhibaatooyin dib ugu celin kara colaadihii uu kasoo baxay, hadii afartii sano mar la qaban doorashooyinkii dhici jiray.
0 Comments Topics: farmaajo mudo-korarsi mursal muudey